Faahfaahinta isticmaalka tuubada
Kaydinta tuubada balaastigga ah Qolka keydku waa inuu ahaadaa mid qabow, hawo leh oo qallalan. Heerkulka heerkulka sare ee ka sarreeya + 45 ° C oo aan lahayn hawo hawo ah waxay sababi kartaa isbeddel joogto ah ee tuubada caagga ah Fadlan la soco in xitaa cirifka tuubada la baakadeeyay, heerkulkan lagu gaari karo qorraxda tooska ah ....
Sidee ayuu darawalkii hore u waayi karaa tuubada gaariga!
Haddii aad rabto inaad si fiican u wado, tuubada baabuurka waa lama huraan! Waxaa jira codsiyo badan oo ah tuubbada gawaarida ee gawaarida, oo aan si faahfaahsan kuugu sheego! Miyaad aad u taqaannaa muuqaalkan? Dhinaca kale, marka hagida gawaarida ay la kulanto xaalado waddo oo murugsan, badanaa way ka dhib badan tahay t ...
Falanqeyn ku saabsan xaaladda hadda jirta iyo rajada horumarka ee suuqa tuubada baabuurta Shiinaha ee 2020
Tuubada caaga ee Automobile waa qaybta ugu weyn ee nidaamka dhuumaha gawaadhida, kaas oo si ballaadhan loogu adeegsado baabuurta, mootada, mashiinada injineernimada, macdanta, metallurgy, batroolka, warshadaha kiimikada iyo goobo kale oo badan. Automobile tuubada waa qaybta ugu weyn suuqa ee warshadaha tuubada. Gawaarida ho ...